Ukukhuthaza Iwebhusayithi SEO nge Semalt
(esimweni somkhankaso owodwa owenziwe ngochwepheshe bakwaSemalt)
Kungekudala kakhulu, iWebhu Lomhlaba bekuyindawo elula yokuthola imininingwane. Kepha konke sekuguqukile. Namuhla, iNethiwekhi ibe ithuluzi elinamandla lokuthuthukisa ibhizinisi. Ukushicilelwa kwamaphepha, iziteshi zomsakazo, kanye nethelevishini kulahlile ithonya langaphambili. Kunabantu abathenga amaphephandaba. Kukhona abalaleli eziteshini zomsakazo. Imali itshaliwe kwezentengiso zethelevishini, kepha wonke umuntu uyaqonda ukuthi isikhathi sesifikile seqiniso le-inthanethi. Lapho, abantu benza imali futhi bathuthukise ibhizinisi eliphumelelayo.
Isikhathi esisha sesifikile
Izinguquko eziguqukayo ekubukeni komhlaba zenzeka phambi kwamehlo ethu. Kukhona abagibeli abasebenza ngokwengeziwe abasebenzisa i-World Web. Ubuchwepheshe obusha benza ukukhula ngesivinini esifanayo. Ungangena ku-Network ngokusebenzisa i-smartphone yakho - ubuke ividiyo, ufunde izindaba noma uthenge i-blouse entsha. Ukukhokhela izimpahla online kulula kakhulu. Umuntu ojwayelekile manje angavakashela isitolo se-inthanethi, azulazule egalari yomkhiqizo, abuze umbuzo wabo. Noma ngubani angathola impendulo esheshayo ngoba impendulo yisimo esibalulekile sensizakalo yekhasimende esezingeni eliphakeme. I-Intanethi sekuyimakethe lapho ungathenga khona konke, futhi ngasikhathi sinye ithuluzi lokuthengisa elinamandla. I-boom yezomnotho yezitolo eziku-inthanethi iqinisekisa inzuzo yamathuluzi e-web. Bangakwazi ngempela ukusiza abanikazi besayithi bakhuphule kakhulu imali engenayo.
Ukuphakanyiswa kweWebhu empeleni kungokwesinye isitolo esithe abathengi bazo abafuna izinsizakalo noma izimpahla ezisendaweni ebonakalayo. Iningi labavakashi bakho lingabantu abacebile. Inqwaba yabathengi abangahle bafuna izimpahla zakho, kepha ... thola imikhiqizo yezimbangi. Ngani? Zenzeka ngaphansi kwelanga ezinhlwini ze-web crawler ngoba zazenze kahle izinsiza zazo ze-Intanethi phambi kwakho. Ingabe umuntu angaxosha futhi abeke izimbangi zakhe esikhundleni sakhe? Yebo, uma unganikeza ukunyuswa kwewebhu kochwepheshe beSemalt.
Iya ezikhundleni eziphezulu
Wonke umuntu ovule isitolo uyazi ukuthi kuyini ukuhweba endaweni ehlonishwayo yedolobha. Iklayenti lizothola umbono wokuqala webhizinisi lakho ngaphambi kokuvakashela. Babheka ikheli lesitolo futhi bahlole ukuvelela kwalo ezingeni lokungazazi. Inkampani, esenkabeni yedolobha, enabavakashi abaningi kanye namakhasimende acebile, izochuma. Amakhasimende acebile azokujahela. Lo mthetho awusebenzi ezinhlanganweni zokuhweba kuphela. Izikhungo zokuzivocavoca, indawo yokuzivocavoca, izikhala nazo zilalela imithetho yokuhlonishwa, njengezitolo ezinkulu noma izindawo zokuphumula. Kuyamangaza ukuthi kuma-World-Wide-Web abantu ngesazela noma ngokuzithoba bathembela emibonweni efanayo ngokuhlonishwa? Uma ungaphezulu kweminyaka eyishumi, insiza yakho ibhekwa njengehlonishwayo futhi ehlonishwayo.
Njengasesitolo esingaxhunyiwe ku-inthanethi, indawo enhle esendaweni ebonakalayo iheha abathengi. Uma uvela emiphumeleni ephezulu yokucinga, u-95% wabathengi abangahle bazokunaka. Njengoba izibalo zibonisa, amaphesenti amabili kuphela kulabo abafuna ukukhohlisa ukufika ekhasini lesine le-search. Ngokungafani nesitolo esingaxhunyiwe ku-inthanethi, ukufinyelela ezikhundleni eziphezulu ngeke kudinge utshalomali oluningi njengecebo elifanele lokuthuthuka. Lapha akufanele uthole isikhulu esingahle siphathwe kubaphathi bakamasipala, kepha uchwepheshe onolwazi. Izinsizakalo zabo kumele futhi zikhokhwe, kepha imali ekhokhwayo iphansi kakhulu kunendleko yokuqasha endaweni yokugcina inhloko-dolobha. Kepha noma okuthengiswayo okuphakathi enkabeni yenhlokodolobha yezwe engacabangi kuzoheha abalandeli abaningi kakhulu abavela emazweni ahlukene njengezikhundla eziphezulu ku-Google SERP.
Yini iphrofayli yamakhasimende?
Ukunikeza ukuhlolwa okujwayelekile kwesitolo esiku-inthanethi nokwazisa ukuthi yini imisebenzi okufanele yenziwe ngokuyinhloko, uchwepheshe we-SEO kufanele ahlaziye izimpahla nezinsizakalo. Kulesi sigaba, kusungulwa isu lokukhuthaza ibhizinisi kanye necebo lomsebenzi eliphelele. Ake sibheke omunye wemikhankaso ephumelelayo yeSemalt - i-Insignis , isitolo sokuhlobisa ikhaya esivela eRomania. Ithengisa izinto ezisetshenziselwa ngaphakathi nangaphandle (ifenisha, amalambu, izinto zasekhishini, abanikazi bamakhandlela, njll.). Le nkampani inikezela ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme kanye nokulethwa okusheshayo kwezimpahla enhlokodolobha nakuwo wonke amadolobha ezwe.
Ukubonakala okujwayelekile kwesitolo se-www okuphezulu kakhulu, imvamisa, kanye nemibuzo ejwayelekile ephansi kwahlaziywa. Ngasikhathi sinye, isazi seSemalt safunda amaphrofayli ezimbangi nabaholi bezemakethe ukubona ubuhle baso. Kwenziwe izakhi zamawebhusayithi aholayo endle kanye nephrofayli yazo yokuxhumanisa, kanye nemibuzo ekhonjwayo yokwenziwa kwamakhasi wewebhu okufika. Esigabeni sokuqala, i-Semalt pro izothola ukuthi isiza sidinga ukuthuthukiswa okujwayelekile. Ekugcineni, umuntu angancoma ukuthuthuka esakhiweni sesiza - ukwakheka, ukuzulazula, indawo nokuqukethwe kwamabhulokshini wolwazi, ukudalwa kwamakhasi amasha e-web.
Kulesi sigaba somkhankaso we- SEO , kufanelekile ukubheka ukuthi ungayiguqula yini i-CMS, ulungise isiza ngamadivayisi eselula, ubhale kabusha i-http ku-https, njalonjalo. Isidingo sokwenza ngcono okujwayelekile kuxoxiswana ngaso nekhasimende ngaphambi kwesikhathi, ngesikhathi sesabelomali sokunyuswa kwewebhusayithi.
Kulesi sigaba, i-SEO pro ibutha, ihlukanise amaqembu futhi inqume imvamisa yomgogodla we-semantic. Ngokuhambisana nefomethi yesitolo se-www, umongo we-semantic ungafaka kusuka kumakhulu ambalwa kuya kumakhulu ezinkulungwane zemibuzo yokusesha. Ukwakheka komgogodla kungathatha izinyanga ezimbalwa, ngakho-ke lokhu kwenziwa ngokuhambisana neminye imisebenzi. Endabeni ye-Insignis, sinqume ukukhuthaza amagama ajwayelekile-wekhasi lasekhaya, isigaba somkhiqizo, nawo wonke imisila emide enezikhundla ku-100 eziphambili. Ngemuva kwezinyanga ezimbili kuqalile ukukhushulwa, sifake ezinye izigaba ezimbili .
Isakhiwo esibanzi sendawo
Noma isiphi isiza sifana nesihlahla lapho isiqu siyikhasi eliyinhloko, futhi izigaba nezihluko zingamagatsha namaqabunga. Isakhiwo sizokuba banzi kanjani kuya ngesakhiwo nohlobo lwendawo. Indawo enekhasi elilodwa isivele inesiqu somuthi lapho izinkomba ezahlukahlukene zingakhula khona. I-Insignis, njengazo zonke izitolo eziku-inthanethi, inezinhlaka eziyinkimbinkimbi kakhulu nezinamazinga amaningi. Eqoqweni ngalinye lemibuzo yokusesha, kufanele usethe futhi ulungiselele ikhasi lokusesha. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ngemibuzo ephansi imvamisa, kungcono ukwengeza ikhasi eliyikhaya lomkhiqizo. Ngemibuzo ephezulu kakhulu, kwakhiwa izigaba zasekhaya.
Ugqozi lwamakhasi amasha okubamba umhlaba luvela ngesikhathi sokuhlaziywa kosesho lwabancintisana, kanye nezimpahla nobubanzi bensiza. Ezitolo ezinkulu zewebhu ezinezikhungo zokuhambisa emadolobheni ahlukahlukene, njenge-Insignis, izimakethe kanye nemikhiqizo enamahhovisi ahambelana nayo, inani lamakhasi okufika landa ngenani lamadolobha. Okuqukethwe lamakhasi e-webhusayithi kufanele kube okuhlukile. Kumaphrojekthi amakhulu, amakhasi wewebhu wokuhlunga amasha enzelwa iminyaka emibili selokhu kwaqala ukukhushulwa kwesiza. Ukuthola umphumela owufunayo, umsebenzi oyinhloko wokwandisa ukwakhiwa kwewebhusayithi kufanele usethwe ngokushesha okukhulu.
Izinhloso zokwenziwa kwangaphakathi
Uchwepheshe ulungisa amaphutha wokusebenziseka kwewebhusayithi yangaphakathi, esebenza ngamakhasi okufika kweqembu lemibuzo, asusa izimpinda zamakhasi. Ukwenza lokhu, ukuhlolwa kwe-SEO kobuchwepheshe besiza kwenziwa ngesisekelo lapho kwenziwa khona umsebenzi wangaphakathi wokwenza umsebenzi. Esimweni se-Insignis, umuntu walungisa amaphutha wabe eseqhubeka nokuxazulula izinkinga ezibalulekile ezazihlonzwa ngocwaningo lwezobuchwepheshe.
Umuntu kufanele enze imisebenzi elandelayo:
ukwengeza amathegi e-meta ekhasi lasekhaya usebenzisa amagama amakhulu okhiye wegama;
ukubeka isivinini sokuphendula kweseva nokulayisha amakhasi esayithi;
ukususa izixhumanisi ezaphukile;
ukulungisa wonke amaphutha angama-404 futhi uqiniseke ukuthi wonke ama-URL alungile;
ukusebenzisa idatha ehlelekile yohlobo lwebhizinisi lasekhaya nokulungisa ukwakheka kwekhaya lomkhiqizo;
ukususa ukuphindwaphindwa kwama-URLs usebenzisa ukuqondisa kabusha okungapheli, amakheli e-canonical, noindex following;
ukulungisa i-robots.txt ukuze uvale amathegi adingekayo futhi uvikele ukuskena kwamakhasi ahlukahlukene wokuhlunga namakhasi wewebhu;
ukukhiqiza imephu yesiza yeXML;
ukubhala okuqukethwe kwe-SEO okuhlukile kwamakhasi ayinhloko nesigaba usebenzisa amagama asemqoka;
ukufaka tags ezingekho ezithombeni ezithombeni ezizenzakalelayo.
Akubalulekile ukusetha amakhasi wewebhu wokungena kepha ukwenza ukuxhumeka kwangaphakathi ukuze amaklayenti nesigcawu sewebhu bakwazi ukungena kalula kwamanye amakhasi ewebhu. Ngaphandle kokuthi lokhu kwenziwe, kungenzeka zingaphumi enkombeni yabakhweli bewebhu. Uchwepheshe we-SEO wakhela ukuxhumanisa kwezigaba zemenyu ngosizo lwemibhalo ethuthukisiwe, lapho engeza khona imibuzo eqoqwe ngaphambili neyayihlanganisiwe, idlulisela isisindo esingamakhasi kusuka kumakhasi wekhasi eliphansi kuya kumakhasi ezinga eliphakeme le-nesting.
Ukusetshenziswa kokuqukethwe kwesitolo seWWW
I-optimizer ngesandla idala amathegi e-meta ayingqayizivele nezihloko ze-H1 ngokususelwa “kumsila omude” wezicelo zokucinga zalawo makhasi wewebhu lapho kudingekile. Futhi, kumakhasi athuthukisiwe esitolo se-www, kwakheka imibhalo efaka imibuzo eyayiqoqwe ngaphambili, ngokusobala, kucatshangelwa izicelo zamanje zabakhweli bewebhu. Imibhalo ithinta zombili izinxa zamakhasi ngemibuzo ephezulu yemvamisa nokukhonjiswa kwemibuzo yomsila omude. Endabeni ye-Insignis, eyodwa ikwazile ukufinyelela amazinga aphezulu kakhulu wamagama ayisihluthulelo, nayo yonke imisila emide ukuze ingene kwi-100 ephezulu. Ngaphezu kwesigaba sewebhu kanye nezihloko ezibalulekile, amakhasi alandelayo athole isabelo esikhulu kunazo zonke traffic - izibani / izibani / izinto zokuhlobisa / amakhandlela.
Lesi yisibalo esiphezulu samakhasi wesisetshenziswa lapho amarobhothi asesha ngeGoogle angakwazi ukukhasa isikhathi esithile. Kunconywe ukuthi kuphela ochwepheshe abanolwazi abasebenze nesabelomali sokukhasa. Uchwepheshe uvala "amakhasi kadoti" enzelwe amaklayenti kuphela, uvimbela abakhwetha wewebhu ukuthi bangavakasheli "amakhasi kadoti" futhi ubavale izixhumanisi.
Ukusebenza Kokusetshenziswa Kwewebhusayithi
Ingabe ama-algorithms e-web crawling anaka izici zokuziphatha? Benza. Yingakho ama-SEO-pros asebenza kwimisebenzi efana:
ukungabuyeli kweklayenti kwisibonisi sokucinga;
ukwehla kwesilinganiso sokuxhuma;
khulisa isikhathi esichithwe ekhasini lewebhu.
Ukuguqulwa kwesitolo se-www samadivayisi eselula kuzokwandisa ukubonakala kwesiza kwimiphumela yeselula. Kuholela nasekuguqukeni okuthuthukile kusuka kumadivayisi eselula. Amanani wokuhamba olula anciphise ukwehla kwamanani. Ukuqanjwa okufanele kwekhasi elithi "About Us" kuzothuthukisa ukuzethemba kwezivakashi nabaqambi bewebhu.
Ukusebenziseka kwewebhusayithi yangaphandle
Ngabe lokhu kusebenza kuluphi usizo? Lokhu kuyasiza kulawo masayithi asebenza endaweni yokuncintisana kakhulu. Kwezinye izindawo zomncintiswano ophansi, ungakwenza ngaphandle kokudala izixhumanisi ezingenayo. Kepha kumawebhusayithi amaningi, ukwenziwa kwangaphandle akunakugwenywa. Izingosi ezihlose ukuqondisisa ziholela kuwe, lapho uthembeka ngokwengeziwe uba "emehlweni" abahlengi bewebhu. Kunamapharamitha amaningi umuntu okufanele akhe ngawo iphrofayli yokuxhumana futhi akhethe abanikeli.
Ukwanda kokuguqulwa kusuka kuzivakashi kuya kumakhasimende
Lesi sigaba sokuphakanyiswa kwewebhusayithi sidinga ulwazi lokuklama, ukusebenzisa, ukumaketha i-imeyili, kanye namakhono ekwakheni okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu. Uchwepheshe we-SEO lapha wenza lezi zenzo ezilandelayo:
ulungisa amafomu oku-oda;
ingeza ubuchule bokuxhumana kumphathi kuya kumphathi;
kushintsha imibala yezakhi zewebhu;
ukumisa kubangela izincwadi zezindaba ezenziwe ngezifiso.
Futhi lokhu kuyikhulu nje lokwenza ngcono okwandisa ukuguqulwa kwesayithi. Uma kukhulunywa ngempumelelo ye-Insignis, elinye lamagama aphambili kule nkampani lathatha indawo yokuqala ohlwini lwe-TOP-10. Elinye igama eliyisihluthulelo (lesigaba esiphambili) selivele lifikile ku-TOP-3. Impumelelo yokuhweba online akuyona umqondo olula. Kungashiwo ngamaqiniso. Impumelelo yomkhankaso we-SEO wale nkampani yaseRomania izinyanga eziyisithupha ibonakala kulezi zibalo ezilandelayo: amagama angama-232 asemqoka asezingeni TOP-1, futhi amagama asemqoka angu-1136 akwi TOP-TEN (ngokuqhathaniswa nezinkomba ngaphambi komkhankaso - 4 no-55, ngokulandelana). Ngenyanga yokuqala, isibalo sabantu abafuna le mikhiqizo ngokusesha kwe-organic sikhuphuke ngaphezulu kwe-1000. Umuntu angabona ukukhuphuka kwemali engenayo kanye nokuqashelwa komkhiqizo ongcono. Ngabe ufuna wonke amakhasi kusayithi lakho akhonjwe ngokushesha? USemalt uzokhetha isu elihle kakhulu lokukhuthaza i-SEO.